प्रचण्ड-माधवको दौड, देउवाको हैरानी ! | परिसंवाद
प्रचण्ड-माधवको दौड, देउवाको हैरानी !
गफाष्टक आइतबार, जेष्ठ ३०, २०७८ मा प्रकाशित
भिरघरे ! अब त बुझिस् होला नि राजनीतिको चुरो कुरो ! अदालतको आशय पनि प्रष्ट भयो होला । हामीलाई अति गरेको थियो । अब देख्छन् दिउँसै सपना । मैले त पहिला नै भनेको थिएँ यस्तै हुन्छ भनेर !
हो काका ! एमाले भत्काउन तिमारु सफल भयौ । हाम्रो नेपाली काँग्रेसलाई फाइदै फाइदा । प्रचण्ड र माधव नेपाल हाम्रो देउवा दाइकोमा चाकरी गर्न पुग्न थाले । माओवादी पछारिए, माधवहरु लतारिए । हाम्रो काँग्रेसको भाग्य दह्रो । कम्युनिष्टहर्ले लुम्बिनीमा रुखमा भोट हाले, अब गण्डकीमा पनि हाम्रो समर्थक बनेर माओवादीहरु खटेका छन् । काका पनि अबको चुनापमा मेरो सर्थक बनेर प्रचारमा हिड्न बाध्य हुने छौ ।
समय परिस्थितिको खेल हो भिरघरे । राजनीतिमा कोही शत्रु र कोही मित्रु हुँदैन । एमाले भित्र पसेर तहसनहस पारेपछी अब हाम्रो काम्रेडको आँखा काँग्रेसतिर फर्किएको छ । संसद पुनस्र्थापना भएपछि ६ महिना देउवा ६ महिना हाम्रो काम्रेड प्रधानमन्त्री बन्छन् । त्यही छ महिनामा हामी हाम्रो काम तमाम पारेर चुनापमा जान्छौ ।
हौ काका ! नमस्कार है ! हैन के कुरो हुँदै छ भिरघरे दाइसंग ?
के कुरो हुन्छ र हौ उभिण्डेका कान्छा । यो भिरघरे आएपछि राजनीतिको बाहेक अरु कुरै हुँदैन । बरु भन् तेरो माधव नेपालको खबर के छ काठमाण्डौमा ?
के हुनु हाम्रो काम्रेडलाई रातको निद्रा न दिनको भोक बनाई हाले । विहिवारको दिन अदालतले कणर्ालीमा खिस्स हास्ने ठाउँ दियो र मात्र हो । अब हाम्रो माधव काम्रेड एक डेड वर्ष देउवा र प्रचण्डकोमा धाउँदै बस्छन् । ओलीले राम्रो गरेनन् ।
तैंले के भनेको भाइ ! माधवले चैं राम्रो गरे र ! प्रचण्डले एमाले खतम पार्नु थियो र १९ पेजको ओली विरोधी फौजदारी पत्र लेखे त्यसमा ल्याप्चे ठोक्ने माधव होइनन् र ! आफ्नै अध्यक्षलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने अनि पद पाइन, भागवण्डा पुगेन भन्ने पनि उनै होइनन् । माधव आफूले आफैंलाई सक्ने व्यक्ति हुन् ।
होइन हौ भिरघरे ! के ओलीको पक्ष लिएर बोल्छस् । पक्ष लिन्छस् भने हाम्रो प्रचण्डको लिन ।
हो काका ! म मात्र होइन हाम्रो नेपाली काँग्रेसका सबैले प्रचण्डको जयजयकार गर्नु पर्छ । प्रचण्डले एमालेलाई तहसनहस नपारेको भए हाम्रो काँग्रेसलाई गाह्रो थियो । प्रचण्डकै कारणले सजिलो छ । अब कम्युनिष्टहरु सकिदै जान्छन् ।
लु चिया खादै गफ गरौं । मैले भित्रैबाट तिमार्को कुरो सुने । कम्युनिष्ट सकिदैन । अहिले केही समयलाई एमाले कमजोर जस्तो देखिएला तर जबज र सूर्य कमजोर हुँदैन । कार्यकर्ताको भावना र विचार विरुद्ध प्रचण्डसंग एकता गर्दाको कुहीगन्धे प्रतिफल एमालेले केही समय भोग्ने छ । माकुने र प्रचण्डहरु जस्तो एमाले सकिदैन।
वाइयात कुरो गर्छे झुम्री ! सकिए ओली सकिने हो हामो प्रचण्ड सकिदैनन् । बरु कहिले भकानिन्छन्, कहिले एकैछिनमा खुशीले गद्गद् हुन्छन् । कहिले लड्डु खान्छन्, कहिले मुर्छा पर्छन् । कार्यकर्तालाई त्यसै मख्ख बनाउछन् ।
हो काका ! कहिले तीन हजार लडाकुलाई ३३ हजार बनाउछन्, कहिले लडाकुको पैसा आफैं समाउछन् । कहिले एमाले र ओलीलाई अन्तिम प्रहार हानेको थिएँ अदालतले मेरै खप्परमा हान्यो र पो भन्न भ्याउँछन् । कहिले मेरो जस्तो भारतलाई कमफर्टेवल हुने सरकार अरुको बन्नै सक्दैन भन्छन्, कहिले अरुलाई भारतको दलाल भन्छन् ।
आइतबार, पुस १८, २०७८
हाम्रो गठबन्धन जुगजुगसम्म, लौजा त !
भाग्गेमानीका भुतै कमारा- जै नेपाल देउवा दाइ!
आइतबार, पुस ४, २०७८
यो चैं कुरो भिरघरे दाजुको ठिकै हो है । प्रचण्डको कहिल्यै विश्वास नगर्नु । तर, मेरै नेता माधव काम्रेडलाई समेत प्रचण्डको कन्दनी समातेर वैतर्नी तर्नु पर्ने भयो र पो । प्रचण्डले अहिलेसम्म अध्यक्ष पद नछोडेको ३३ वर्ष भए छ । हाम्रा काम्रेड उनैले देलान् र खाउँला भनेर पछ्याउँदै छन् । अन्तिममा एमाले र सूर्य चिन्ह छोडेर झाक्री र रावललाई लिएर जान्छन् होला । हामी पो बिलखबन्दमा पर्ने भयौ !
के बिलखबन्दमा पर्नु ! हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले तिर्मालाई सोरपटार पारेर माओवादीको मुल प्रवाहमा मिसाई हाल्छन् नि ! किन पिर गर्छस् । हेर उभिण्डे कान्छा ! हाम्रो पनि अब जबजकै लाइन हो । महान काम्रेड राष्ट्रनायक प्रचण्डले जे चितायो त्यही पुग्छ ।
पुगेको पुग्यै भो काका ! अब उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने चिताएका छन्, ओलीलाई समाप्त पार्ने चिताएका छन् तर, आफू समाप्त भएको चिताएका छैनन् ।
ठिक भन्यो भिरघरेले ! प्रचण्डले चितायो कि त्यसको विपरित हुन्छ । बरु भैंसी पूजा गरे जस्तो अदालतको पूजा गरे चिताएको पुग्थो होला ।
बढी नबोल झुम्री ! तेरो ओली समाप्त भए । अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ । हाम्रो विपक्षमा फैसला भयो भने सेटिङ भनेर ठूलो आन्दोलन गरिन्छ ।
हो काकाहर्ले पहिला पनि ११ गतेको फैसाल हुँदा लड्डु कोचाकोच २३ गते फैसला हुँदा भाला घोचाघोच गरेकै हो । यो पटक पनि त्यस्तै बेला आउँदै छ । तिमार्को विपक्षमा फैसला भयो भने काकीले ल्याको लड्डु खानु आरामले रुदै घरमा बस्नु । हाम्रो काँग्रेस र एमाले भने चुनाप प्रचारमा लाग्छौं ।
हामी माने पो चुनाप प्रचार ! एमाले र काँग्रेसले मात्रै भाग लिएर चुनाप हुन्छ ? हाम्रो माओवादी, बाबुरामको के जाती पार्टी, मोहन बैद्य, मोहन विक्रम, ऋषि कट्टेलहर्ले भाग नलिएपछि केको चुनाप !
समयले तिमार्लाई पर्खिदैन । काँग्रेसलाई तिर्खा लागेको थियो ओलीले पानी दिए । अब प्रचण्डले नखा भन्दैमा हुन्छ । तिमी वाइयात कुरो गर्छौ । अब हाम्रो काँग्रेस अगाडि बढ्यो ।
भीरमा गुल्टिनलाई अगाडि बढ्छ । ओलीले गराउने चुनापमा तिमार्ले कसरी जित्छौ ?
जनताले भोट दिएर जित्छौ । तिमार्को पार्टी समाप्त हुन्छ भनेर हामीले जोगाई दिनु पर्ने । हैट ! यस्तो कुरा गरेर बस्तिन म । लागें खेत जोत्न !
जै नेपाल !
सर्जक पदम गौतमको विश्रामपुर !
चुनापमा कांग्रेसको औंलो समाउने, त्यसपछि डुँडुलो निल्ने !
आफू छ छारामा, खुट्टा टेक्छ भारमा!